Lactational Amenorrhoea and Contraception - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကိုယျဝနျဆောငျဘဝကနေ မီးဖှားသနျ့စငျသောအမှု အောငျမွငျစှာပွီးမွောကျသှားတဲ့အခါမှာ မြိုးဥကွှခွေငျးဟာလညျး သဘာဝအလြောကျ ခဏတာရပျနားသှားပါတယျ။ အကယျ၍သာ မီးဖှားပွီးစမိခငျတဈဦးဟာ သားသမီးကို စနဈကကြမြိခငျနို့ရညျ တိုကျသှားမယျဆိုရငျ မိခငျခန်ဓာကိုယျရဲ့သဘာဝအလြောကျ သားဆကျခွားနိုငျခွငျး (Lactational Amenorrhoea Method – LAM) အကြိုးကြေးဇူးကိုရရှိမှာပဲဖွဈပါတယျ။
ဒီ LAM နညျးကိုအသုံးပွုပွီး မိခငျအယောကျ ၁၀၀ မှာ ၉၈ယောကျဟာ အနညျးဆုံးခွောကျလအထိ အခွားသားဆကျခွားနညျးတှမေလိုအပျဘဲ အောငျအောငျမွငျမွငျ သားဆကျခွားနိုငျတာကိုတှရေ့ပါတယျ။ ဒါဟာ ကလေးကိုနို့တိုကျတဲ့အခါမှာ မိခငျကိုယျတှငျးမှာ ဟျောမုနျးအပွောငျးအလဲတှဖွေဈပျေါလာပွီးမြိုးဥကွှခွေငျးကိုဟနျ့တားပေးလိုကျခွငျးကွောငျ့ပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Lactational amenorrhoea method. LAM အောငျမွငျဖို့အတှကျ မိခငျနို့ကို ပမာဏတဈခုအထိရအောငျတိုကျပေးရငျး နညျးစနဈကကြလြိုကျနာဖို့တော့လိုအပျပါတယျ။
– ကလေးအသကျခွောကျလအထိ မိခငျနို့တဈမြိုးတညျးကိုသာ တိုကျကြှေးရပါမယျ။
– မိခငျနို့ကို နဘေ့ကျမှာ အနညျးဆုံးလေးနာရီခွားတဈကွိမျ၊ ညဘကျမှာအနညျးဆုံး ခွောကျနာရီခွားတဈကွိမျ ခဏခဏ တိုကျပေးရပါမယျ။
– ကလေးမှေးပွီး ၅၆ရကျအတှငျးမှာ ရာသီသှေးထပျမဆငျးသော အမြိုးသမီးဖွဈရပါမယျ။
– ကလေးကိုအနအေထားမှနျမှနျနို့တိုကျပေးခွငျးဖွဈရပါမယျ။ နို့တိုကျတဲ့အခါမှာ ကလေးရဲ့မကျြနှာဟာ မိခငျနို့အုံနဲ့ပိနခွေငျး၊ နှာခေါငျးပိနခွေငျးတို့ဖွဈမနသေငျ့ပါ။
အထကျပါနညျးလမျးမြားကိုလိုကျနာပွီး မိခငျနို့ရညျတိုကျကြှေးခွငျးအားဖွငျ့ သဘာဝကကြသြားဆကျခွားခွငျးအကြိုးကြေးဇူးမြားကိုရရှိမှာဖွဈပါတယျလို့ တငျပွရငျး။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဘဝကနေ မီးဖွားသန့်စင်သောအမှု အောင်မြင်စွာပြီးမြောက်သွားတဲ့အခါမှာ မျိုးဥကြွေခြင်းဟာလည်း သဘာဝအလျောက် ခဏတာရပ်နားသွားပါတယ်။ အကယ်၍သာ မီးဖွားပြီးစမိခင်တစ်ဦးဟာ သားသမီးကို စနစ်ကျကျမိခင်နို့ရည် တိုက်သွားမယ်ဆိုရင် မိခင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝအလျောက် သားဆက်ခြားနိုင်ခြင်း (Lactational Amenorrhoea Method - LAM) အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ LAM နည်းကိုအသုံးပြုပြီး မိခင်အယောက် ၁၀၀ မှာ ၉၈ယောက်ဟာ အနည်းဆုံးခြောက်လအထိ အခြားသားဆက်ခြားနည်းတွေမလိုအပ်ဘဲ အောင်အောင်မြင်မြင် သားဆက်ခြားနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါဟာ ကလေးကိုနို့တိုက်တဲ့အခါမှာ မိခင်ကိုယ်တွင်းမှာ ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးမျိုးဥကြွေခြင်းကိုဟန့်တားပေးလိုက်ခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Lactational amenorrhoea method. LAM အောင်မြင်ဖို့အတွက် မိခင်နို့ကို ပမာဏတစ်ခုအထိရအောင်တိုက်ပေးရင်း နည်းစနစ်ကျကျလိုက်နာဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။
- ကလေးအသက်ခြောက်လအထိ မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်းကိုသာ တိုက်ကျွေးရပါမယ်။
- မိခင်နို့ကို နေ့ဘက်မှာ အနည်းဆုံးလေးနာရီခြားတစ်ကြိမ်၊ ညဘက်မှာအနည်းဆုံး ခြောက်နာရီခြားတစ်ကြိမ် ခဏခဏ တိုက်ပေးရပါမယ်။
- ကလေးမွေးပြီး ၅၆ရက်အတွင်းမှာ ရာသီသွေးထပ်မဆင်းသော အမျိုးသမီးဖြစ်ရပါမယ်။
- ကလေးကိုအနေအထားမှန်မှန်နို့တိုက်ပေးခြင်းဖြစ်ရပါမယ်။ နို့တိုက်တဲ့အခါမှာ ကလေးရဲ့မျက်နှာဟာ မိခင်နို့အုံနဲ့ပိနေခြင်း၊ နှာခေါင်းပိနေခြင်းတို့ဖြစ်မနေသင့်ပါ။
အထက်ပါနည်းလမ်းများကိုလိုက်နာပြီး မိခင်နို့ရည်တိုက်ကျွေးခြင်းအားဖြင့် သဘာဝကျကျသားဆက်ခြားခြင်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ တင်ပြရင်း။